Xildhibaanad si kulul u beenisay in 3 nin isla guursatay | Baydhabo Online
Xildhibaanad si kulul u beenisay in 3 nin isla guursatay
Xildhibaanad Huda Axmed Cali oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxay si kulul u beenisay in saddex nin ay isla guursatay, iyadoona eedeymaha loo soo jeediyay ku sheegtay been abuur.
Toddobaadkii la soo dhaafay, ayaa barraha Internet-yada waxaa lagu baahinaya wararka ku aadan in Marwada Golaha Shacabka ka tirsan, ay markeliya wada guursatay saddex nin.
Xildhibaanad Huda Axmed Cali oo Saxaafadda kula hadashay Magaalada Muqdisho, ayaa odaygii soo qoray oo lagu magacaabo Boqor Maxamed Jaamac ku eedeysay in uu isagu ka masuul yahay wararka been abuurka ahi ee laga faafiyay.
Xildhibaanad Huda Axmed Cali, ayaa sababta uu sidaasi u samaynayo waxaa ay ku sheegtay, isagoo raba in mar labaad uu iibsado kursiga ay ku soo baxday, waxayna ku eedeysay in falalka noocaasi ah uu ku dhaqmaayay tan iyo sanadkii 2012-ka.
Waxay sheegtay in dadaaliin ay suuqa ugu jiraan, si ay ugu soo baacayaan kursiga ay beesheeda ku meteleyso Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Somaliya. Xildhibaanadii iyada ka horeeyay, ayay sheegtay in sidaasi oo kale uu ku soo sameeyay.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata, ayay sheegtay in beesha uu odayga u yahay Boqor Maxamed Jaamac uu kala dilay, ka dib markii ay sheegtay in uu mindiyo isugu dhiibay.
Boqor Maxamed Jaamac, ayaa qoraal uu ku shaaciyay barraha bulshada waxaa uu ku sheegay in isagoo ah saygii Huda, ay laba nin oo kale la guursatay.
Arrintan, ayaa hadalhayn xoogan ka dhex dhalisay qaybaha bulshada, iyadoo dadku ku kala qaybsameen